China Iifektri zobuso abathathu eziguqula iLathe mveliso kunye nabenzi | UOturn
Oomatshini bethu bonke bondla nge-Huadian CNC Controller （okanye i-Nokia, iFanuc）, banokufikelela kunxibelelwano oluphindwe kabini emva koko bagqibe ukwenza umngxunya we-Bore, Screw thread kunye ne-Sphere.
(1) Oomatshini bethu bonke bondla nge-Huadian CNC Isilawuli （okanye i-Siemens, iFanuc）, banokufikelela kunxibelelwano oluphindwe kabini emva koko bagqibe ukwenza umngxunya we-Bore-Screw, Screw thread kunye ne-Sphere. Umlawuli we-CNC unokuhambelana okuhle, umsebenzi onamandla kunye nokusebenza ngokulula.
(2) Ukutyibilika ukutyibilika kwindlela yetafile kusetyenziswa umgangatho ongaphezulu wokuphosa isinyithi, umkhombe wokuphosa ngokurhabaxa, ukuvutha kunye nonyango lokuguga amatyeli amathathu. Ukuphelisa ngokupheleleyo uxinzelelo lwangaphakathi oluyintsalela, umphezulu wendlela yesikhokelo wamkela ukucinywa kweaudiyo ephezulu kwaye ubunzima buye kwi-HRC55. Ngokusebenza ngokuchanekileyo okuphezulu kokugaya, ukuqinisekisa ukuchaneka, ukuqina, ukuzinza.
(3) Icandelo lokuhambisa lamkela ukujija ibhola ngokuchanekileyo kunye nokudibanisa ukuphelisa umsantsa, ukuqinisekisa ukuba umatshini uqhuba uzinzile.
(4) Intloko yamandla ixhotywe ngamanqanaba amathathu esantya sokutshintsha kwesantya kunye nemoto enamandla, ukufezekisa isantya esisezantsi kodwa itorque ephezulu, inokumelana nomthwalo wokusika onzima, ukuphucula ukusebenza ngokukuko.
(5) Izixhobo zokusebenza zamkela ukubotshwa koxinzelelo lwamanzi olwenziweyo, ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa amandla abasebenzi.
(6) Umatshini wamkele ukuthambisa ajikeleze embindini, ukuqinisekisa ukuba ukuthambisa ajikeleze onke amalungu ahambayo ngoko ukuphucula ubomi inkonzo kumatshini.
Umatshini we-CNC okhethekileyo kwiValve ubukhulu becala usetyenziselwa ukulungisa iValve, umzimba wempompo, iinxalenye ezizenzekelayo, iinxalenye zoomatshini bokwakha njl.inokusebenza kwiinkqubo ezininzi, umzekelo, isiphelo sobuso, isangqa esingaphandle, umphambili wangaphakathi, umngxunya wangaphakathi intambo, iBore-hole kunye neSphere.Isebenzile ngeHuadian CNC Controller （okanye iNokia, iGPS CNC Controller）, Iyakuqonda ukuzenzekelayo, ukuchaneka okuphezulu, iindidi ezininzi kunye nemveliso emininzi.
Intloko yamandla dia. (Mm)
Ubungakanani boMatshini obuninzi (mm)
Ubuninzi boMatshini bokuTshekisha. (Mm)
Yokuluka Centre Hight (mm)
Othini isantya-Gear stepless (r / min)
Ukuthambisa ajikeleze ngekhompyutha
Egqithileyo Uhlobo lweGantry CNC ukubhola kunye nomatshini wokugaya
Okulandelayo: Umbhobho wencwadana yokubamba i-Lathe
Umsebenzi wokuKhanyisa umatshini wokugaya we-CNC
Single Side kusombiwa Machine